महिला स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टरको अभावले सेवाग्राहीहरू मार्कामा – इन्सेक
जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा महिला स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञको अभाव भएको कारण महिला विरामी सेवाग्राहीहरू मार्कामा पर्दै आएका छन् ।
प्रादेशिक अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञमा ११ जना डाक्टर कार्यरत छन् । तर, एक जना महिला डाक्टर स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञको रुपमा रुवि सिंह मात्रै रहनु भएको छ । डा. रुवि सिंह १५ दिनदेखि तीन महिनाको विदामा रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.नागेन्द्र यादवले बताउनु भयो ।
अस्पतालमा कार्यरत एक मात्र महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ लामो समयदेखि विदामा रहेकाले लैङ्गिक हिंसामा परेर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आउने महिलाहरू इच्छाविपरित पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन बाध्य भएको महिला अधिकारकर्मी शिला झाले बताउनु भयो ।
लैङ्गिक हिंसामा परेर चार महिनाकी गर्भवती भएकी २० वर्षीया युवतीको महिला डाक्टर नभएपछि स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन । फागुन १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पीडितले लैङ्गिक हिंसामा परेको भनि दिएको जाहेरीपछि प्रहरीले उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा लगेको थियो । पीडित युवतीले आफुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टर महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ नै हुनुपर्ने माग गरेपछि उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेन ।
लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हाल महिला डाक्टर नभएकाले अन्य अस्पतालमा गराउन सल्लाह दिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नागेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ । अहिले हामीसँग महिला डाक्टर नभएकाले गर्दा अन्य अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन स्पष्ट सुझाव दिएको डा. यादवले बताउनु भयो ।
पीडितले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि महिला डाक्टर माग गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन काठमाडौँ पठाउने तयारी गरेको छ । पीडितलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन काठमाडौँ पठाउँदा आउने जाने खर्च पीडित स्वयम्ले तिर्नुपर्ने भएकाले गर्दा पीडित युवतीको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन । पीडित युवती अहिले घरबाहिर जनकपुरमै साथीको घरमा डेरा गरि बसि रहेकाले आर्थिक समस्या भएको र कानुनी उपचारका लागि समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसक्दा मुद्दा दर्ता हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका इन्चार्ज समेत रहनु भएकी सई दिपिका ओझाले बताउनु भयो ।